Fugacar® (ဖူဂါကာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Fugacar® (ဖူဂါကာ)
Fugacar (ဖူဂါကာ) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr. Zin Thu Thu Win ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
Generic Name: Fugacar® (ဖူဂါကာ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Fugacar (ဖူဂါကာ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Fugacar ကို အောက်ပါ ကပ်ပါးပိုး တစ်ကောင် ဖြစ်စေ ပေါင်းစု၍ ဖြစ်စေ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောဂါ ဖြစ်စေလျှင် အသုံးများပါသည်။
– Enterobius vermicularis (pinworm)
– Ascaris lumbricoides (large roundworm) (သန်လုံးကောင်)
– Trichuris trichiura(whipworm)
– Ancylostoma duodenale (common hookworm) (ချိတ်ပြားကောင်)
-Necator americanus (American hookworm).
Fugacar (ဖူဂါကာ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Fugacar ကိုအစာနှင့်တွဲသောက်၍ဖြစ်စေ အစာမပါဘဲဖြစ်စေ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်၊
Fugacar (ဖူဂါကာ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Fugacar ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Fugacar ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Fugacar ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Fugacar ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးဝါးအများစုကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းတော့ မပြုလုပ်ရပါ။
Fugacar ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Fugacar (ဖူဂါကာ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင့်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များရှိနေလျှင် ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
မိမိသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်နေပါက ဆေးအသုံးမပြုမီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရမည်။
အခြားသော ဆေးများ (တိုင်းရင်းဆေး၊ ဆရာဝန် မညွှန်းထားသောဆေး) သောက်သုံးနေပါက ကြိုတင်အသိပေးရမည်။
Fugacar တွင်ပါဝင်သော အခြားသော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုများ ရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရမည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Fugacar (ဖူဂါကာ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်များတွင် စိတ်ချရမှုရှိမရှိကို မသိရသေးသည့် ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအမြဲလုပ်ပါ။)
Fugacar (ဖူဂါကာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Fugacar (ဖူဂါကာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Fugacar ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Fugacar ကို Metronidazole (ပိုးသတ်ဆေး) ၊ Cimetidine (အစာအိမ်ဆေး) ဆေးများနှင့် တွဲမသုံးရ။ Cimetidine သည် Fugacar ဖြိုခွဲမှုဖြစ်စဉ်ကို တားဆီးပြီး သွေးတွင်း Fugacar ပမာဏကို များစေပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Fugacar (ဖူဂါကာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Fugacar က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Fugacar (ဖူဂါကာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Fugacar သည်မည်သို့သော ရောဂါများနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသနည်း။
Fugacar သည် သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ ဥပမာ –
(ထိုသို့သော ဆေးကိုစွဲသုံးရသောအခြေအနေမျိုးတွင် သွေးစစ်ဆေးမှု အသည်းနှင့်ပတ်သက်သောစစ်ဆေးမှုများ ပုံမှန်ပြုလုပ်ရမည်။)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Fugacar (ဖူဂါကာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပုံမှန်ပမာဏ – တစ်လုံးသောက်လျှင် လုံလောက်ပါသည်။
အဖြစ်များသော ဒေသတွင်နေထိုင်သူများဖြစ်ပါက ဆေးတစ်လုံးကို ၁ နှစ်လျှင် ၃ကြိမ်၊ ၄ကြိမ်သောက်သုံးရပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Fugacar (ဖူဂါကာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
တစ်နှစ်အထက်ကလေးများအတွက် တစ်လုံးသောက်လျှင် လုံလောက်ပါသည်။
Fugacar (ဖူဂါကာ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Fugacar ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Fugacar ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇွန် 26, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 14, 2017
Fugacar® (Mebendazole). http://www.mims.com/vietnam/drug/info/Fugacar/Fugacar?type=full. Accessed September 30, 2016.
စအိုပတ်လည်မှာ ယားယံတာမျိုးဖြစ်တာ ဘာ့ကြောင့်များလဲ ။ ။
အိမ်မှာ ဘယ်နှစ်လတစ်ခါလောက် သန်ချဖို့လိုအပ်မလဲ
သင်္ဘောစေ့လေးတွေကနေ ဒီလိုကောင်ကျိုးတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ ။
သန်ကျဆေးသောက်ရမှာကြောက်တဲ့သူတွေအတွက် သဘာဝဆေး (၇) မျိုး
ကိုယ့်ကလေး သွေးအားမနည်းစေဖို့အစားအသောက်တွေကို မေမေတို့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပေးရမလဲ။ ။
ကလေးကို သန်ချပေးဖို့လိုနေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာများ